Ihiala Eriela Ji Ọhụụ - Igbo News | News in Igbo Language
Sep 15, 2021 - 14:43 Updated: Sep 15, 2021 - 14:44
Oke ọñụ̀ dara na nsonso a n'obodo Ihiala dị n'okpuru ọchịchị steeti Anambra, dịka ndị obodo ahụ merùbèrè mmemme iri ji ọhụụ ha nke ahọ 2021.
Mmemme Ịwa Ji ahụ e mere n'ama egwuregwu ụlọakwụkwọ 'Odoata Central School', ma bụrụkwa nke e jiri mmemme ịka ụka weere ọnọdụ n'ụlọụka 'Saint Martin of Tours Parish, Ihiala' wee malite.
Ya bụ óké mmemme dọtàrà ụmụafọ obodo ahụ nọgasị n'ebe dị icheiche, ndị ikwu na ibe, ndị nwadiala, ndị enyi, ndị agbatobi na ndị ọzọ na-echèré obodo ahụ ezi echichè.
Mmemme ahụ màlitezịkwàrà n'uju oge e jiri egwu ọdịnala we dubàta eze ọdịnala obodo ahụ na ndị Ichie ya, Ndị Ogbuehi na ndị òtù Oluoha na mmemme ahụ; emume wee kpòghara ọkụ.
N'okwu ya oge ọ na-agọ ọjị na mmemme ịwa ji ahụ, eze ọdịnala Ihiala, bụ Igwe Thomas Obidiegwu kelere Chineke maka ọrụ ọma ya n'isi ụmụafọ obodo ahụ, ọkachasị n'ihi ndụ, ngọzị, udo na ọganihu nke o jiri chọọ ha mma, ya na amara o nyere ha, ha wee kọọ ihe n'ubi ma dịkwa ndụ weta ihe ha kọnyèrè n'ubì.
O kelekwara aka na-achị steeti Anambra, bụ Gọvanọ Willie Obianọ, maka ụzọ dị icheiche o sigoro nwògharịa ngalaba niile nke steeti ahụ, ọkachasị ngalaba ọrụ ugbo; etu o siri kwàlite ọnọdụ obibindụ ụmụafọ steeti ahụ, ma wetekwa ọnọdụ mmepe tọrọ atọ n'ime-ime obodo dị icheiche na steeti ahụ.
O kwezịrị nkwà na Ndị Ihiala ga-aga n'ihu ịkwadò ọchịchị nọ ugbua na steeti ahụ, ọbụladị dịka ọ kpọkukwàrà ụmụafọ obodo ahụ ka ha sonyesie ike na nnwògharị ahụ na-aga n'ihu ugbua na ngalaba ọrụ ugbo n'ime steeti ahụ, ọkachasị dịka o siri metụta Ugbo Azụ Ụnọ, n'ihi na úrù dị icheiche dị n'ọrụ ugbo.
N'okwu nke ya, otu onye n'ime ndị bịara mmemme ahụ, ma bụrụkwa Kọmishọna na-ahụ maka mgbasaozi na ịkụziri ọhaneze ihe ha kwesiri ịma, bụ Maazị C-Don Adinuba kọwara mmemme iri ji ọhụụ dịka oge e ji enye Chineke ekele maka owuwe ihe ubì, ya na oge e ji akwanyere ji ùgwù dịka eze ihe a kọrọ n'ubì, ma kpakwa maka ọdịmma obodo.
O nyere ndị obodo ahụ ndụmọdụ ka ha gaa n'ihu inye ọchịchị Gọvanọ Obianọ nkwàdo ka o wee rụzuo ọrụ ọma ahụ ọ malitegoro na steeti ahụ n'ozuzuokè; ọbụnadị dịka ọ kpere ka Chineke were aka ya họpụta onye ga-anọchi anya Gọvanọ Obianọ site na nhọpụta ọkwa gọvanọ a ga-eme n'abalị isii nke ọnwa Nọvemba ahọ a.
Na ntụnye nke ya, onyeisioche òtù ọrụ pụrụ iche haziri mmemme ahụ, bụ Maazị Ody Chukwube kèlèrè eze ọdịnala obodo ahụ, bụ Igwe Obidịegwu maka ọmarịcha ọchịchị ya n'obodo ahụ, rụtụsịa aka n'ụfọdụ ụzọ dị icheiche ọchịchị ya sigoro kwàlite mmepe obodo ahụ, ma kpọkuo ya ka o jisie ike n'ọrụ; ọbụladị dịka o kpere ka Chineke gaa n'ihu inye ya amamihe na ogologo ndụ.
Ọtụtụ ndị ọzọ so n'isi ọchịchị steeti Anambra, ndị selitere isi n'ọrụ gọọmenti, ndị na-egwu okwe ndọrọndọrọ ọchịchị, na ọtụtụ ndị ọzọ e ji okwu ha agba ìzù na ngalaba dị icheiche sonyèrè na mmemme ahụ.
Olofu Awụchaala n'Anambra Dịka Onyeisi Ndị Uweojii Ọhụrụ Steeti Ahụ
Ticha Akuma Kalu Njoku
Ìgbo zuru ka e mee!